ICessna Citation Excel XLS + FSX & P3D / ama-ailerons endiza awasebenzi kahle
Umbuzo ICessna Citation Excel XLS + FSX & P3D / ama-ailerons endiza awasebenzi kahle
iminyaka 2 5 izinyanga ezedlule #648 by julian1245
Sawubona Rikoooo ngithanda ukubuza kini bafo ngale ndiza. Ngiyayithanda le ndiza ku-MFSXS futhi yinhle kodwa ibona inkinga ngendiza engicasulayo impela. Kuyinto glitch ne-ailerons lapho lapho uphenduka bathanda i-spazz ngaphandle. Indiza iyaphenduka kepha kubukeka kungenangqondo ukuthi bengizulazula uma kungenzeka, nganoma yisiphi ithuba, ube nokubukeka futhi ukwenze ngokulungiswa ngenguqulo ebuyekeziwe noma okuthile engingakuthanda kakhulu uma bekuqinisile ngoba im ukujabulisa indiza enkulu. Angiqiniseki uma kungokuthile ngomdlalo noma uma ngenza okuthile okungalungile lapho ngiyifaka.
Siyabonga ungazise uma got imibono.
Isikhathi ukudala page: 0.164 imizuzwana